09 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ92019
လေယာဉ်များ၏စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်း၏ပထမဦးဆုံး 2019 လအတွင်းပြည်နယ်လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ General Manager Hüseyin Keskin, 8, ဝန်စာရင်းဇယားများ၏ခရီးသည်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်အသစ်များ၏ခွဲဝေမှု, "လေကြောင်းဆိုင်ရာ '' ဦးဆောင်ကဏ္ဍ ဟူ. ပါရှိသည်တူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux ဖြစ်နေဆဲပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ [ပို ... ]
Turkoglu Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်နယ်ဆေးရုံ Turkoglu မှဗဟိုအဓိပ်ပာလက်လှမ်းအတွက်မြို့ Creek အဘိဓါန်ကျော်တံတားများဆောက်လုပ်ခြင်းဟာ 2200 150 မီတာမီတာမှကျကြပါလိမ့်မယ်စတင်ခဲ့သည်။ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Turkoglu Creek အဘိဓါန်ခရိုင်ဆိုလိုတံတားခရိုင်အပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးစတင် [ပို ... ]
Denizli မြူနီစီပယ်, 2019-2020 "Denizli ကျောင်းသားကဒ်" ဗီဇာယူပြီးများအတွက်သတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်ကျောင်းသားများကိုဒီတော့ကျောင်းတစ်နှစ်ရဲ့ start ။ ဗီဇာကာလစက်တင်ဘာလ 30 2019 အပေါ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ Denizli မြူနီစီပယ်, မြို့ဘတ်စ်ကားများတွင်အသုံးပြုရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Denizli သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Surveillance, Alanya ပုံမှန်စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် Alanya ရဲဌာနယာဉ်အသွားအလာဌာနခွဲစာရင်းစစ် Alanya အမျိုးမျိုးအချက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးအများပြည်သူဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုနှင့် [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor အနှေး, 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့အသုံးပြုပုံက "ဆိုင်ကယ် Path ကို" ၌ "30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံပန်းခြံ" ၏ဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်ရဲ့စက်ဘီးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, "စက်ဘီးလမ်းများစီမံကိန်း" [ပို ... ]
အိမ်ရှင်အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အားကစားနှင့်အတူ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Kayseri ၏ဗဟိုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဗဟို Anatolia ခရီးစဉ်၏ Erciyes Grand Prix Velo စက်ဘီးခရီးစဉ်ပြိုင်ပွဲ Kayseri ကျင်းပခဲ့သည်ပြီးနောက်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးသမဂ္ဂ (UCI) နှင့်တူရကီ [ပို ... ]
Konya Konya, ကွန်ကရစ်ခြေလှမ်းများ 50 နှစ်ပေါင်းခေါ်ဆောင်သွားလာမည့်ခြေလှမ်းများစဉ်းစားဆင်ခြေဖုံးယူလျက်ရှိသည်။ TCDD နှင့်အတူ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဆိုပါခရီးသည်လိုင်း 15 နေ့ OSB နှင့် Konya Konya Gara-Gara အချင်းချင်းKaşınhanıအကြား THOUSAND ခရီးသည်လုပ်ကိုင်ရန်ပူးတွဲကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် [ပို ... ]
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်မကြာသေးမီကတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုအလိုတော်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်! flash ကို Kulislerdeki Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ဟုဆိုကာပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်အလိုအရတစ်ဦးအရူးစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်နောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည်! နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန် CHP အစ္စတန်ဘူလ်ခိုင်မာ Channel ကိုရှင်းပြဖို့ပြင်ဆင်နေနေပါသည်! ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
6-15 88 စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ အပိုဆောင်းအချိန်စီစဉ်ဖို့နှောင်းပိုင်းတွင်ညအချိန်တွင်သည်အထိ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတသောİZBANကြောင့်။ İZBAN,6စက်တင်ဘာလ 2019, အ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲတလျှောက်တွင်သောကြာနေ့က၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစုစုပေါင်း 40 အပိုဆောင်းအချိန်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။ [ပို ... ]
Yahya ဒုတိယအကြိမ်ယခုကပ္ပတိန်ရပ်ကွက်အတွင်းအဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများ ပတ်သက်. လမ်းရထားလိုင်းကိုကြောင်းပြောဆိုထားသည်ယခုကြောင့်အစီအစဉ်ဟာလမ်းရထားလိုင်းကို၏ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းကိုစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုတချို့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့လူသိများသည်နှင့်အမျှတစ်ဦးပျော်ပွဲစားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ဗိုလ်ကြီး Yahya ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3200 တထောင်သန်းကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမယနေ့သင်တန်းနှုန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသောမွို့၌ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မိဘသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များပေးရန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားများ, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ခေါ်ဆိုမှုမှ IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluရဲ့ပေးကမ်းနားကို [ပို ... ]
တူရကီKarabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (Kardemir) INC ပစ်ချပထမဦးဆုံးအကြီးစားသံနှင့်သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း၏အမြစ်အောက်မှာနှစ်တွင် "အမျိုးသားရေးစက်မှု drive ကို" တွင်စတင်ခဲ့ပြီးသောဂရိတ်ခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Ataturk xnumx'l သမ္မတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန် 1920 '' လည်း [ပို ... ]
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Mamdouh Büyükkılıç'ın, 150 ၏မြို့တော်။ ခုနှစ်သည်စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုပေး၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အတွက် Airlift, Kocasinan အတွက် Melikgazi သူတို့ '' ထို့ပြင် Belsize 6.5 Mobilyakent ကနေတိုးချဲ့ကီလိုမီတာ 'Keykubad နိုင်ငံများအသင်းBüyükkılıçဥယျာဉ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြုမူကြောင်းဖော်ပြ [ပို ... ]
2019 မှ 2020: လိုင်းGüzeloğlu'nunညွှန်ကြားချက်, ပဌမနေ့၌မြှို့နယ်ပိုင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 06-00 ပညာသင်နှစ်, 18 အတွက် Diyarbakir အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့တော်လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Hasan Basri နာရီအကြား 00 နိုင်ငံသားများပြင်းထန်စွာအသုံးပြုတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့, နောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဆောင်ရွက်မည် [ပို ... ]
အချင်းချင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "အချင်းချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ၌အကြှနျုပျတို့၏နေဆဲအရပျ၌ရှိရထားနှင့်လေယာဉ်နှင့်အတူပြုနဲ့အတူလျော့ကျသောကြာကြာသတ်မှတ်ခြင်းရှိမရှိ Felicity ပါတီဗဟိုခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Saban Kaya, ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမြို့ကြီးများရှိမရှိ, [ပို ... ]
သမိုင်းအော်တိုမန်အင်ပါယာ9စက်တင်ဘာလ 1855 Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-Varna နှင့် Varna-Balaklava ကြေးနန်းလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးခဲ့နှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်အတွက်ယနေ့တွင်။9စက်တင်ဘာလ 1861-ပါအိတ်စွပ် Cellatkahv လိုင်း (11 ကီလိုမီတာ) ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။9စက်တင်ဘာလ 1882 Nahid Bey နှင့် Mehmet Efendi Teodorica Kos ၌ရှိ၏ [ပို ... ]